ZipPay को साथ कपाल कपाल - अष्ट्रेलिया ✂️ - जापान कैंची
ZipPay को साथ कपाल काट्ने कैंची - अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड
Zip Pay मा लोकप्रिय नयाँ भुक्तानी विकल्प हो अष्ट्रेलिया जसले जापान सिजर्सका ग्राहकहरूलाई ब्याजरहित किस्ताहरूका साथ "अहिले यसको स्वामित्व लिनुहोस्, पछि तिर्नुहोस्" अनुमति दिन्छ।
ZipPay अब सामान र सेवाहरू किन्न प्रयोग गरिन्छ र तिनीहरूलाई पछि orders 50 देखि $ 1,000 सम्म अर्डरमा भुक्तान गर्न।
ZipPay ले कसरी काम गर्दछ?
एकचोटि तपाईंले साइन अप गर्नुभयो र अनुमोदित भएपछि तपाईंसँग of २,००० डलरसम्म क्रेडिट हुनेछ र किनमेल खाता। यो जस्तो सुन्नेजस्तो सरल छ, तपाईंले छान्नको लागि उत्पादनहरू लिनुहुन्छ, र भिसा वा मास्टरकार्ड मार्फत पूरा पैसा तिर्नुको सट्टा तपाईं छनौट गर्नुहुन्छ ZipPay चेकआउट विकल्पको रूपमा, तपाइँको जानकारी भर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाइँसँग १ पूरा भुक्तानीको सट्टा ब्याज-मुक्त किस्ताहरू छन्।
जिप पे अष्ट्रेलियामा उपलब्ध छ 🇦🇺!
मेरो जिप भुक्तान खाता काम गर्न कति समय लाग्छ?
तपाईं द्रुत साइन-अप प्रक्रियामा गए पछि Zip Pay को प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंले साइन अप गर्नुभयो र अनुमोदित भएपछि, तपाईं प्रतिष्ठित ZipPay विक्रेताहरूको चेकआउट पृष्ठ मार्फत खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
ZipPay को साथ म के सिंचीहरू किन्न सक्छु?
जापान कैंचीले ZipPay सँग राम्ररी र आदरपूर्वक काम गर्दछ तपाईंलाई भुक्तान विधिको रूपमा ZipPay का साथ हाम्रा सम्पूर्ण उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्न। जापान कैंचीसँग व्यावसायिक पेसा कपाल कतराहरूको लागि जिपपे उपलब्ध छ। जस्तै प्रसिद्ध ब्रान्डबाट Yasaka, Ichiro, Jaguar, जान्तेत्सु, Mina र अरु धेरै।
जिप भुक्तानको साथ किनमेलका सुविधाहरू?
ब्याज रहित भुक्तानी योजनाहरु। जीप भुक्तानी कुनै पनि ब्यालेन्समा कुनै ब्याज चार्ज गर्दैन तपाईको खातामा हुन सक्छ।
कम शुल्क। एक $ avoid अपहारनीय मासिक शुल्क तपाईंको खरीदको मिति देखि निम्न महिनाको अन्त्यमा तपाईंको खातामा लागू गर्न सकिन्छ। तपाईं यो शुल्क बेवास्ता गर्नुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न, केवल निर्धारित खरीद मिति अघि तपाईंको खरीद फिर्ता तिर्नुहोस्। You of को ढिला शुल्क लागू हुन्छ यदि तपाईंले निर्धारित न्यूनतम मितिको २१ दिन भित्र आफ्नो न्यूनतम भुक्तानी गर्नुभएन भने।
क्रेडिट सीमा। Zip Pay ले क्रेडिट सीमाका तीन फरक ब्राकेटहरू प्रदान गर्दछ: $ ,$०, $ and०० र $ १,०००।
साधारण साइन-अप प्रक्रिया। भ्रमण गर्नुहोस् Zip Pay को साइन-अप पृष्ठ र या त वैध फेसबुक वा PayPal खाता सेटअप गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
लचिलो योजनाहरु। जब सम्म तपाईं न्यूनतम आवश्यक $ 40 मासिक भुक्तानी पूरा गर्नुहुन्छ, तपाईं आफूले मनपराएको रूपमा भुक्तानहरू सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। साप्ताहिक, पाक्षिक, वा मासिक कुनै पनि रकमको लागि भुक्तान गर्न छनौट गर्नुहोस्। ZipPay को साथ तपाई पुन: भुक्तानी नियन्त्रण गर्छ जुन तपाईको आवश्यकता अनुसार मिल्छ।
सदस्यता कटौती एक प्रत्यक्ष डेबिट समाधान तपाईको बैंक खाता वा क्रेडिट कार्डबाट स्वचालित रूपमा पुन: भुक्तानी गर्दछ तपाईले सेटअप गर्नुभएको पुन: भुक्तानी रकम अनुसार।
ZipPay नियम र सर्तहरूको विषय, हेर्नुहोस्
जिप भुक्तानको साथ को साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ?
अष्ट्रेलियाको नागरिक वा स्थायी निवासी हुनुहोस्
कम्तिमा १ 18 वर्षको उमेर र कानुनी रूपमा बाध्यकारी अनुबन्धमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनुहोस्
एक मान्य र प्रमाणित मोबाइल फोन नम्बर र ईमेल ठेगाना छ
एउटा अष्ट्रेलियाई बैंक खाता वा क्रेडिट कार्ड छ
तपाईंको आफ्नै बारेमा आधारभूत जानकारीको साथसाथै बैंक खाता वा क्रेडिट कार्ड विवरणहरू राख्नुहोस्
ZipPay को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
प्रश्न: Zip Pay छनौट गरेपछि म कहिले भुक्तानी गर्ने छु?
उत्तर: तपाईं कुनै अगाडि शुल्क र लचिलो पुनःभुक्तानी बिना $ 1000 को क्रेडिट संग एक पुन: प्रयोज्य खाता सिर्जना गर्नुहोस्, ताकि तपाईं मासिक तिर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने।
प्रश्न: हेयरड्रेसि sc सिंची अर्डरको शीर्षमा कति ब्याज Zip Pay ले चार्ज गर्दछ?
उत्तर: जबसम्म तपाईं Zip Pay को साथ समय पेमेन्टमा नियमित गर्नुहुन्छ त्यहाँ अर्डरहरूको लागि कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क वा ब्याज शुल्कहरू हुँदैन।
प्रश्न: ZipPay ले मेरो कपाल कैंची अर्डर को लागी एक क्रेडिट जाँच प्रदर्शन गर्दछ?
उत्तर: तपाईको साइन इन हुँदा तपाईको कार्डमा कुनै क्रेडिट जाँचहरू गरिन्छन्।
प्रश्न: मैले एक जिप भुक्तान हरायो! उनीहरूले मलाई लिने शुल्कहरू के छन्?
उत्तर:जिप पेले छुटेको भुक्तानीको लागि फ्लैट $ late लेट शुल्क लिनेछ।
प्रश्न: जापान कैंचीले जिप पे प्रयोग गरेर अधिक बनाउँछ?
उत्तर: हामी ZipPay अर्डरहरूमा कुनै अतिरिक्त रकमहरू गर्दैनौं। जापान कैंचीले अस्ट्रेलियामा हेयरड्रेसि। पेसेवरहरूलाई सुविधाजनक भुक्तानी विधिहरू उपलब्ध गर्न जिप पे प्रयोग गर्दछ।
प्रश्न: नाई र ब्यूटी सैलुन आपूर्तिका लागि जीप भुक्तानी उपलब्ध छ?
उत्तर:ZipPay निश्चित रूपमा हेयरड्रेसि products उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखलाका लागि उपलब्ध छ र जापान कैंचीमा हामीसँग पेशेवर कपालहरू उपलब्ध छन् $ १149 over भन्दा बढीको अर्डरमा नि: शुल्क शिपिंगको साथ।